Fil d'actualités du 09/04/2020
09/04/2020 - 10:00 : AFRIKA-COVID-19: Mampanantena fanohanana hatrany amin'ny 10 Miliara dolara ny BAD na Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana.
09/04/2020 - 09:30 : FANELEZANA TSAHO: Voasambotry ilay tovovavy iray voatonona ho atidoha nikotrika ilay horonam-peo naparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera nanomboka ny 20 martsa nilaza fa efa 200 ny voan'ny coronavirus teto Antananarivo, 70 any Toamasina, ary efa nisy maty.
Archive du 20200228
Fanonganana Tsy mbola afa-doza ny praiminisitra…
Efa iny niaraha-nahalala iny ny fanapahan-kevitry ny filankevitry ny minisitra nampiantso fivoriana tsy ara-potoanan’ny parlemanta roa tonta manomboka ny 4 martsa izao.
Fanenjehana mpitondra ambony Manasarotra ny fampiharana lalàna ny depiote
Miandry ny tena fanombohan’ny asan’ny Fitsarana Avo (HCJ) aloha ny olom-pirenena. Ny 20 febroary lasa teo ny lanonana ara-pitsarana fianianan`ireo mpikambana ao anatin`ny Fitsarana avo (HCJ).
Moussa Soalihy “Tsy mora ny mitantana firenena.”
Amin’ny fitondrana firenena dia ilaina ny fisian’ny mpanohitra sy tsikera, hoy ny sekretera jeneralin’ny faribolam-pandinihana Miozolimanina, Moussa Soalihy.
Honoré Rasolonjatovo “Mibaribary ny fitiavan-tseza ataon`ny HVM sy TIM”
“Hitantsika ny zava-misy amin`izao. Manao fanoherana bontolo fotsiny ny antoko HVM syTIM”,
Lalàmpanorenana Maro ireo andininy miteraka adihevitra
Voafaritra ao anivon`ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana (LFI) taona 2020 fa hiatrika fitsapan-kevi-bahoaka isika eto Madagasikara amin`ity taona ity.
Filoha Rajoelina Nidina be ny taham-pankafizan’ny olona azy
Tsy mahafantatra.izay tena laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka Malagasy ny fitondram-panjakana, raha jerena amin’ny fomba fiasany.
Olivier Rakotovazaha -MFM “Tsy mampino hoe izao fitondrana izao no hamerina ny Iles Eparses”
Naneho ny fahitany ny fivoaran’ny raharaham-pirenena ankehitriny tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny, Olivier Rakotovazaha, ny antoko politika MFM.
RAZAFISAMBATRA JEAN LOUIS Tokony hametra-pialana ny filoham-pirenena
Manoloana ny fitotonganan’ny fari-piainan’ny vahoaka malagasy sy ny tsy fisian’ny finiavana ara-politika avy amin’ny filoham-pirenena,
Fiverenan’ny TIM sy HVM « Famerenana ny hasin’ny fanaovana politika»
Tsy mbola haintsika Malagasy loatra ny mampihatra ny atao hoe demokrasia sy repoblika izay navelan’ny fanjanahantany eto Madagasikara,
Ozinina mpamokatra Ethanol Aiza ilay fampanantenan’i Mialy Rajoelina tao Ambilobe ?
Afaka herinandro mahery kely, dia higadona ny andron’ny 8 martsa 2020 fotoana hanamarihana ny andron’ny vehivavy.
Maneno sahona avokoa !
Nihemotra niha nanakaiky ny rambony ny laharantsika amin’ny resaka ady amin’ny kolikoly, voasokajy ho firenena faha-29 amin’ny firenena 31 mahantra indrindra, zara raha misy 7,91%
Fambolen-kazo Nahavita ny adidiny ny IT University
Ao anatin’ny fanambin’ny firenena hamboly 60 tapitrisa hazo mifandraika amin’ny faha-60 taona nahazoana ny fahaleovantena, dia nanatanteraka ny anjara adidiny ny IT University.
Manizingizina ny JIRAMA “Azo sotroina tsara ny rano tsinjarainay”
Manoloana ny filazana an-gazety, nivoaka omaly 27 febroary, izay milaza fa tsy azo sotroin’ny olombelona ny rano tsinjarain’ny
Fahazoan-dalana hamily fiara Afaka mangataka ireo feno 17 taona sy 7 volana
Feno 18 taona katroka ihany ny tovolahy na tovovavy iray eto amintsika vao afaka mahazo taratasy fahazoan-dalana hamily fiara eo
HAFARI sy ny Globo vision developpement Hanampy ireo tsy an’asa manerana ny Nosy
Roso hatrany ny fikambanana Hafari Malagasy sy ny Société Globo vision developpement hivondronan’ireo mpikambana amin’ny ady hatao amin’ny tsy fananan’asa manerana ny Nosy.
Ankizy sima Iray isaky ny telo minitra ireo teraka lasibatra
Iray isaky ny telo minitra ireo zaza menavava vao teraka fantatra fa sima maneran-tany.
Namoaka fanambarana fohy tetsy amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana teknika etsy Anosy omaly ny minisitra, Rijasoa Andriamanana Josoa, sy ny